Raad Raac News Online – Sawiro: Dalka Kenya ayaa ka bilaabmay Rabshado la xariira doorashooyinka wadankaasi iyadoo lasoo sheegaya…
Sawiro: Dalka Kenya ayaa ka bilaabmay Rabshado la xariira doorashooyinka wadankaasi iyadoo lasoo sheegaya…
Somalia October 26, 2017 Comments Off on Sawiro: Dalka Kenya ayaa ka bilaabmay Rabshado la xariira doorashooyinka wadankaasi iyadoo lasoo sheegaya…
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in qeybo ka mid ah dalkaasi ay ka bilaabmeen rabshado la xiriira doorashada oo ay wadaan dhallinyaro ku hubeysan aalado kala duwan, waxaana ay xireen waddooyinka.
Degmada Homa Bay County oo ku taal galbeedka dalka Kenya ayay rabshadahani ka socdaan, waxaana ay dhallinyaro is biirsaday ay xireen waddoonka iyagoona gubaya taayarro iyo qashin.
Waxaa ay sidoo diideen in ay doorasho ka qabsoonto degmayaadim iyadoona goobihii loo cayimay in codadka lagu dhiibto ay iminka haawanayaan.
Ciidamo military ah ayaa la geeyay, waxaana ay ishorfadhiyaan dhallinyarada.
Dibadbaxayaasha oo ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee NASA ayaa mid mid u tagaya goobaha loo cayimay in codka lagu dhiibto degmada Homa Bay County, waxaana ay xaqiijinayaan in aysan ka dhicin degmadaasi wax doorasho ah.
Shalay ayay aheyd markii hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga uu sheegay in uusan ka qeyb gali doonin doorashada islamarkaana uu ugu baaqay taageerasha in eysan ka qeybgelin doorashada ku celiska ah